I-Realme ibhengeza ngokusesikweni ukuqala kwayo kwintengiso yase China Zonke iinkonzo ze-intanethi
I-Realme ibhengeza ngokusesikweni ukuqala kwayo kwintengiso yase China
Kutshanje sinike ingxelo nge Isicwangciso senkampani sokungena kwintengiso yakho yasekhaya kwaye namhlanje, inkampani ibhengeze ngokusesikweni ubukho bayo e-China.
Ekwenzeni isibhengezo, umphathi wenkampani wathi uphawu luya kubonelela ngamava awodwa ngexabiso elifanayo kwaye oko kujolise kulutsha.
I-China okwangoku yeyona ntengiso inkulu ye-smartphone emhlabeni, kwaye ngenxa yoko, inkampani ijonge ukuthengisa izixhobo zayo nangakumbi. I-Realme ikwalindeleke ukuba ingene eMbindi Mpuma nakwimakethi yaseYurophu kamva kulo nyaka. Oku kuyenza icace gca into yokuba uphawu lwangaphambi kohlobo lweOppo unamabhongo amakhulu.
I-Realme okwangoku inobukho kumazwe asixhenxe, kubandakanya i-India, iVietnam, iMalaysia, i-Indonesia, iThailand, i-Egypt kunye nePhilippines. Ngoku, amanye amazwe amabini ongezelelweyo kuluhlu: iTshayina neTaiwan. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba kuya kuba njalo nakwezokugqibela.
Ngee-smartphones kwisipaji sakho, I-Realme ikwazile ukufikelela kwimpumelelo engathethekiyo kwimarike yaseIndiya.okanye. Kunyaka omnye wokuphehlelelwa kwayo, inkampani iphumelele i-8% yesabelo sentengiso kwii-smartphones e-India. Oku akuncinci kwaye kubonisa umdlalo olungileyo onayo, okhokelele ekubeni ngomnye wabavelisi abahambahambayo abanobukho obukhulu kwimakethi yaseIndiya.
Inkampani ayikazisi ii-smartphones e-China, ewe. I-Realme 3 Pro inokuba phakathi kwee-smartphones zokuqala ezikhoyo apho ngokusemthethweni. Olu luhlu luphakathi luphehlelelwe e-India kwangoko kule veki kwaye luya kuba lolona lukhuthazwayo luphawu lwentengiso yakuba iqale ukubhengeza repertoire yayo yokuhambisa izixhobo kwi-Asia enkulu, kuba, okwangoku, lelona qhinga lenkampani.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Realme ibhengeza ngokusesikweni ukuqala kwayo kwintengiso yase China
Ii -apps ezintandathu ezisuswe kuGoogle Play ngobuqhetseba bentengiso
IHuawei iqala ukubonelela ngeenkonzo zokulungisa ii-smartphones zayo ngexabiso eliphantsi